Ciidamada Jubbaland iyo AMISOM oo la wareegay deegaano dhaca Galbeedka Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Ciidamada Maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay maanta la wareegeen deegaano ku yaalla galbeedka Kismaayo.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalo xoogan ayaa ka dhacay deegaanadaas ka hor inta ay la wareegeen ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ilaa shan tuulo kala wareegeen Al-Shabaab, ayna dib ka faah faahin doonaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Tuulooyinka ay la wareegeen ay ka mid tahay Beerxaani, Qudus iyo Cabdi Dhoore, halkaasoo ay ka dhaceen dagaaladii cuslaa.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaaladaas uu khasaare kala duwan ka soo gaaray labada dhinac, balse si rasmi ah looma oga.
Maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay howl galo ka bilaabayaan deegaanada Jubbooyinka oo ay inta badan ku xoogan yihiin Al-Shabaab.
Amb. Nicholas Kay “Soomaaliya ma ahan dal fashilmay, dib ayay u soo kabaneysaa”